Yuusuf Garaad | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Meles Zenawi wuxuu ahaa Ra’iisal Wasaarihii Ethiopia ee labaatan sano ka badan hareeyay siyaasadda Ethiopia, saameyn weyna ku yeeshay Soomaaliya, Eritrea iyo dalal kale. Dowladda Ethiopia waxay sagaashameeyadii isu aragtay, dooneysayna in uu caalamku u arko in ay tahay dalka ugu saameynta badan Soomaaliya oo sannadahaas ahayd Dowlad la’aan. Sidaa darteedna ay tahay in ciddii Soomaaliya wax u qabaneysa ay Ethiopia isla qabtaan ama ugu yaraan ay isla ogaadaan. Sannadkii 1999 ayaa Madaxweynaha Jamhuriyadda Djibouti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu New York, Hoggaamiyayaasha Dalalka Adduunka hortooda uu uga dhawaaqday shir aanuu cidna uga fasax qaadan, kana wargelin. Waa shirkii Carta. …
Waxaa maalmahaan socda olole lagu dalbayo in ay Dowladdu u istaagto dhallinyaro Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalal shisheeye, taas oo loo arko, ahna waajib Dowladda saaran. Maaddaama uu ololuhu sii xoogeysanayo, mararka qaarkoodna ay ka hadlayaan dhinacyo aan ahayn xog ogaal buuxa, ayaan goostay in aan soo bandhigo xogta hadda suurta-galka ah in aan la wadaago dadweynaha. Waa dadaal ay waddo Dowladda Soomaaliya laakiin aan weli la soo geba gebeyn. Waxaan shacabka ku wargelinayaa in aan billownay xiriirro dhowr ah oo ku saabsan dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku xiran dalalka Ethiopia, Seychelles iyo India. Ethiopia madaxdeeda ayaan la soo qaadnay …
Dhaqan, Af, iyo Taariikhda DuniddaDiplomasiyadda & Dunidda
Siddeetamaadkii Soomaaliya waa ay saaxiibbo yareysay. Waxaa batay dhaliisha iyo eedeymaha uu caalamku u soo jeedinayo Dowladda. Soomaaliya waxay u baahatay in ay is fasirto. In ay caalamka isu fasirto. La fahmo marxaladda ay mareyso. Dowladdii saaxiib ah la sii xoojiyo saaxiibtinnimadeeda, middii aan saxiib ahayna la isku dayo in saaxiib laga yeesho ama ugu yaraan la xaqiijiyo in aanay cadow ku noqon Soomaaliya. Si taas loo yeelo, Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu soo saaray wareegto. Madaxda dalka ugu sarreysa oo dhan oo uu isagu ugu horreeyo ayaa mid kasta loo qoondeeyay in uu wafdi hoggaamiyo, oo uu wadahadal la soo …
Laga soo billaabo Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf Axmed, Guddoomiye Shariif Xasan iyo Ra’iisal Wasaare Cali Maxamed Geeddi, ku xiji Nuur-Cadde, Shiikh Shariif, Xasan Shiikh, Saacid Shirdoon, Cabdiweli Shiikh, Cumar Cabdirashiid iyo qaar kale oo Wasiirro u badan Madaxda Sare ee dalka soo martay intooda badan inta aanay xilka qaban waxay ahaayeen rag aan macriifo wanaagsan leennahay. Qaar aan sheeko wadaag nahay. Kuwo aan arday wada ahayn iyo qaar aan awal ku tilmaami jiray saaxiibbo dhow oo aan guryaha iyo Hoteellada isku booqan jirnay inkasta oo markii dambe aan u beddelay in ay yihiin rag aan is naqaan. Sidaas ay tahay, weligeey …
Adiga ayaa ku qornaa in aad galabta ii raacdo dhagaxdhigga sida la ii sheegay. Ayuu igu yiri isaga oo weydiin ka wada. Anna waan uga jawaabay. Ma tagtay meeshii? Haa ayaan haddana ku jawaabay. Maxaa dhacay markaas? Yaa dhagaxdhigay? Waan u sheegay. Waxaan u raaciyay sida ay wax u dhaceen oo dhan iyo meesha uu Cabdulqaadir Xaaji Masalle ku soo galay howshaan. Wuxuu yiri Sow anigu kuma qorneyn muxuu Cabdulqaaddir ka doonay? Kamaan jawaabin. Isaga ayaa isaga jawaabay – Waa khalad, ayuu yiri. Anigu meeshii ayaan tegey iyada oo aan cidina joogin oo lagu kala tegey, hadda ayaanan ka socdaa. …
Kacaanka Oktoobar wuxuu qaban jiray dabbaaldeg sannadle ah oo ku beegan maalintii militerigu uu xukunka la wareegay waa 21-ka Oktoobar. Waxay Dowladdu qabanqaabin jirtay dabbaaldeg iyo fantasiyo aad uga weyn kan maalinta Gobonnimada. Ilaa yaraanteydii arrintaa si uun ayaan u dhibsan jiray. Ilaa carruurnimadeydii waxaan u qabay in maalinta Xorriyadda aanay jirin maalin Qaran oo ka mudan. Markii aan garaadsadayna waxaan u arkay Kacaanka laftiisa in ay u roonayd in uu maalinta Xorriyadda xoogga saaro maaddaama ay tahay mid isu keeni karta dadka oo dhan Kacaan, Kacaan-diid iyo Moogayaashaba. Haddii aan isku qalbi la noqon maalintaas, ugu yaraan ma jiro …
Marka uu dhismo Gole siyaasadeed oo Soomaaliyeed – mid Baarlamaan ama mid Xukuumadeed, heer Federaal ama heer Goboleed, saxaafadda waxaad ku arkeysaa cinwaan ku dhahaya ‘akhriso magacyada iyo beelaha ay ka soo jeedaan’. Ilama ahan in Dhaqankan cusub ee Saxaafadda qoraalka ahi uu yahay mid u adeegaya Qarannimada Soomaaliya. Taa cagisgeed waxaan u qabaa in uu wiiqi karo kalsoonida ka dhexeysa xubnaha Golaha iyo ama tan kala dhexeysa Shacabka. Ku sii dar oo waa fadhiidnimo xagga saxaafadda ah. Qofku qabiilka ma dooran kamana bixi karo. Markii uu dhashay ilaa maantana waa lagu sheegayay qabiilkaas. Macna badan ma soo gudbineyso reerka …